Hub ka kooban dhowr nooc loo waday Maamulka Khatumo oo gacanta lagu dhigay iyo warar kasoo baxaayo - Wargeyska Faafiye
Hub ka kooban dhowr nooc loo waday Maamulka Khatumo oo gacanta lagu dhigay iyo warar kasoo baxaayo
Wararka ka imaanayo Deegaanka Galinsoor ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Ciidamada Ammaanka ay gacanta ku dhigeen Hub ka kooban dhowr nooc oo loo waday Maamulka Khaatumo State.
Hubkaani oo u badnaa noocyada culus, ayaa waxaa gacanta ku dhigay Ciidamada Maamulka Galmudug ee Deegaankaasi, waxaana la sheegayaa inuu saarnaa Gaari Candho-meydle ah.
Mid kamid ah Saraakiisha Ciidamada Maamulka ee Deegaanka Galinsoor ayaa Warbaahinta Magaalada Muqdisho u Cadeeyay in Hubka lagu soo dhax qariyay Gaariga islamarkaana uu iskugu jiro Qoryaha Lidka Diyaaradaha iyo Jiib.
Sidoo kale, Sargaalkaani oo hadalkiisa sii watay, ayaa waxa uu Xusay in Hubka loo waday Maamulka Khaatumo,waxaana uu Daboolka ka qaaday in Hubka Al-shabaab laga iibiyay lana doonayay in Khaatumo loo gudbiyo.
Dhanka kale, waxaa arrintaasi beeniyay Maamulka Khaatumo, waxa ayna sheegen inuusan jirin Hub dhankooda loo waday oo laqabtay.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSomali minister hints at move to ban FGM.Rajo intee la eg ayuu qabaa?Xafiiska UNISOM ooka danbeeysey xil ka qaadista RW CabdiweliA/Sunna oo sheegaysa hub iyo gaadiid inay qabsatay.Baydhabo oo la geeyay 100 askari AMISOM ah